Is Social Midhiya Inotichinjisa Mune Psychopaths? | Martech Zone
Nguva yekumwe kunakidzwa kweChishanu! Vanhu vazhinji usanditevere uye usakoshese simba rangu rakashata rezvemagariro online. Handina chokwadi chekuti chero munhu akandiisa se psychopath pachena kana kwete, asi panogona kunge paine vanhu vaviri vari kushamisika. Handitende kuti ndiri - asi ndine shungu mumakakatanwa angu epamhepo. Ini ndinotoshatirwa kamwechete muchinguva - asi ndichiri kuyedza kuratidza kuremekedza maonero evamwe.
Iyo yakareba-nguva mhedzisiro yekushandisa hupenyu hwako mune chaiye pasirese nepo ichigara yakabatana neiyo chaiyo iyo haisati yanyatsonzwisiswa. Nepo kurapwa kweInternet kupindwa muropa kwave kuripo kubvira pakati pe'90s, zvakakosha kuti uzive kuti vanhu vazhinji kupfuura nakare kose vari kuratidza zvisinganzwisisike zvinopesana nemagariro maitiro izvo zvino zvine chekuita nekushandisa nguva yakawandisa online. Is Social Midhiya Inotichinjisa Mune Psychopaths?
Pamudzi wezviitiko zvangu zvepamhepo inyaya yekuti ini ndiri pachena uye ndiri pachena mukuzivikanwa kwangu. Ini ndinozvidavirira kuzvinhu zvandinotaura online nekuti ini ndinoisa zita rangu uye pikicha yangu pairi. Handiite chero chinhu ndisinga zivikanwe. Kutenda kwangu kuti yakawanda yehunhu hwepfungwa dzatinoona online inyaya yekuti hapana mhedzisiro kune vanhu vanopaza kana kuve nehunyengeri online pavanenge vakahwanda kuseri kwejasi rekusazivikanwa. Ini handitende kuti vanhu vane hunyanzvi hwekuInternet kupfuura zvavaimbove vakaita muhupenyu chaihwo… asi zviri nyore kuve psychopathic kana iwe usingaitwe pachako kuzvidavirira.
Ichi chikuru infographic! Ndinofunga kuti rakarurama chaizvo. Zita guru zvakare.
Mbudzi 3, 2013 na4: 03 PM
Icho HAPANA chinhu chekuita nesocial media. Izvo zvinongova apo dambudziko rinonyanya kuoneka uye pane iyo info ndeyekushandira pamwe kudzidza. Iyo ine CHESE chinhu chekuita nenyaya yekuti maAmerican… ..vanotariswa nebasa. Zvese zviri muhupenyu hwavo zvinotenderera pane chimwe chikamu chebasa, uye vashoma vanowana zororo zvekare. Kana vanhu vasingawane nguva yakakwana yekushandisa nevana vavo (vatungamiriri vedu VERENGUERI nezvimwewo) vana havadzidze kutaura nezvezvinhu nevabereki vavo. Vazhinji havasi kudzidza iwo manzwiro anotiparadzanisa nemhuka. Ndakazviona mumatanho ese emari. Ivo vanowana zvakanyanya vanowanzove vari pabasa kana kure uye vanopedza nguva shoma kwazvo kukwidza mutero wechikwereti, ndinoreva mwana ***. Kumbira chero nanny kana au vaviri, zvinosuwisa, asi zvinonyangadza panguva imwe chete. Kana vari vemari shoma vanotambira… .vazhinji vari kushanda mabasa maviri nezvimwe kupa uye zvakare… ..vana havasi kurerwa zvakanaka. Zvinosuruvarisa kutenderedza… ..usatye kuti Germany nezvimwe zvakafanana, ivo VAKASIYANA zvakanyanya kana tasvika panguva yemhuri yekuzorora (haagari ari amai), nguva yezororo, nezvimwewo Pane nzira iri nani yekubatsira mhuri dzedu. Ndakaverenga zvinyorwa nguva dzese ndichitaura nezvekuti maAmerican ndivo vashandi vanoshanda kwese kwese… .. zvadaro endai kumazuva matanhatu ekushanda uye simudzirai d *** vana !!!
Mbudzi 3, 2013 na7: 20 PM
Ini ndinotenda ndiri mumwe wevaAmerican vaunotaura nezva @driventowin: disqus! Nekudaro, ini handingabvumirani kuti ndakaita sarudzo yebasa YEMHURI mhuri. Ini ndaigara ndichiita zvese uye ndiine hukama husingaite nevana vangu (ndaive baba vasina murume). Ini handitende kuti unofanirwa kupira imwe kune imwe. Uye ndaisazomboisa mhuri yangu pekupedzisira.
Mbudzi 3, 2013 na10: 58 PM
Izvo zvinotyisa kunzwa munhu, ndizvozvo chaizvo. Ndinoona mhuri dzakawanda kwazvo uko iwe uchingoziva kuti imhuri b / c vanosvika ndokusiya pamwe chete. Vamwe vakamanikidzwa zvakanyanya kubva kunetsekana yezvehupfumi zvekuti havagone kunakidzwa nehupenyu. Wakatanga kumisikidzwa usati wave nevana here? Kana kuita zvese mushure? Zvakawanda zviri nyore kuita kana iwe uine vana mushure, asi zvinogona kuitwa.
Nov 4, 2013 pa10: 22AM
Yakanga isiri kusvika pandakatanga bhizinesi rangu ndega (iine $ 0 uye mwanakomana wangu kutanga koreji) kuti ndive nerusununguko rwekusanganisa zvizere izvo zviviri! Ini ndinotenda ini ndinoshanda akawanda maawa akawanda kupfuura muvhareji weAmerica - asi yakawanda yacho iri kunze kwemhuri nguva kubva pakati pehusiku kusvika 4AM 🙂